Proclaiming the Word - Ny korontana miseho rehefa tsy ataontsika voalohany Andriamanitra | Outlines of Messages
Ny korontana miseho rehefa tsy ataontsika voalohany Andriamanitra
Tantara telo no miseho ao amin’ny bokin’I Jeremia.
Ny tantara voalohany dia mikasika ilay tanora atao hoe Jeremia. Jeremia dia lehilahy iray nofidian’Andriamanitra ho amin’ny asa tena sarotra iray.
Ny tantara faharoa dia ny tantaran’ny Zanak’Israely. Taorian’ny taona maro nanompoan-tsampy sy nironana tamin’ny fiodinana tamin’Andriamanitra, dia leo Andriamanitra. Nomen’Andriamanitra asa haminany mikasika ny vaovao ratsy fa ho babon’ny Babyloniana ry zareo.
Ny tantara fahatelo dia Andriamanitra mihitsy. Fo vakin’ny Ray izay mahita ny zanany izay lavo mankany amin’ny fiodinana.
Rehefa tsy voalohany eo amin’ny fiainantsika Andriamanitra dia tsy maintsy hahita olana goavana isika. Io olana io dia ianao ihany no mampisy azy rehefa tsy voalohany Izy.
Izany no niseho tamin’ny olom-boafidin’Andrimanitra, Israely. Nanomboka nitankosona tamin’ny firenena hafa sy ny andriamaniny zareo. Nanomboka nanambady tamin’ny olon-kafa izay mifanohitra amin’ny finoan’ny jiosy zareo. Mieritreritra izy fa afaka mifehy, sy mandray an-tanana ny zavatra rehetra.
Fampitandremana 1 – rehefa mandeha manaraka zavatra hafa ankoatra ny fenitr’Andriamanitra ianao dia mandeha amin’ny korontana tsy azo fehezina.
Namintina ny faminaniana ny krizin’ Zanak’Israely tamin-kery Jeremia.
“Izany mihitsy, teny amin’ny havoana andrandraina sy teny ambany hazo mahitsy rehetra no nandrianao nijanganjaganao.” (Jeremia 2, 20).
Amin’Israely, ny ahitra dia ohatra ny maitso amin’ny lafiny iray; Taloha Elabe, ry zareo dia teny andaniny, nanompo sampy sy ireo andriamani-tsi- izy Bala. Nandoro ny zanany ho sorona ho an’I Moleka. Ny andininy 28 dia milaza fa nanana andriamanitra (sampy marobe) tahaka ny fananany tanàna maro ry zareo. Tena nanao fahavetavetana tamin’ny firaisana ara-nofo, tsy marina tamin’ny fanaovan-draharaha ara-barotra. Hoy Andriamanitra:”ampy izay”. Tamin’ny voalohanydia ohatry ny tsy maninona izany. Moa ve ny ankizy nanapoizina tahaka ny bibilava? Taloha elabe izy nanaikitra. Taloha elabe, izy dia nandresy anao ka lasa nanana olana be ianao. Ny fanarahanao zavatra ankoatra sain’Andriamantira dia mahatonga ny fiainanao ho simba ambony ambany.
Fampitandremana 2 – ny fanarahana mpitarika tsy mpino dia mitondra amin’ny fiainana tsy araka an’Andriamanitra.
Io mihitsy anefa no nataon’ny Zanak’Israely. Nanaiky mpitarika tsy mpino izay toerana mitaky toe-panahy araka an’Andriamanitra. “Ny mpisorona tsy nanao hoe aiza Jehovah?Ary ny mpiadidy lalàna tsy nahalàla Ahy; Ny mpitondra koa nanota tamiko, Ary ny mpaminany naminany tamin’ny anaran’i Bala ka nanaraka ireny tsy mahasoa.” (Jeremia 2.8).
Israely dia firenena izay ny mpitondra fivavahana tsy nitady an’Andriamanitra. Ireo mpanapaka tsy mahalàlaan’Andriamanitra na ny foto-pisainany. Ireo mpanjaka dia niodina tamin’Andriamanitra ary nanorina ny fanjakany toy izay fanjakan’Andriamanitra.
Ireo mitory dia nitory ny teolojian’I Bala toy izay Tenin’Andriamanitra. Rehefa manomboka manaraka mpitarika tsy araka an’Andriamanitra isika dia tsy ho ela dia hanaraka ny fomba fiainany isika.
Fampitandremana 3- Fipetrahanao mialoha an’Andriamanitra dia fipetrahanao ho amin’ny tsy fahombiazana.
Israely dia nanapa-kevitra fa ny heviny dia tsara noho ny hevitr’Andriamanitra.
“Fa zava-dratsy roa loha no nataon’ny oloko: Efa nahafoy Ahy loharanon’aina izy ka nihady lavaka famorian-drano ho an’ny tenany, nefa lavaka mitriatriatra tsy mahatan-drano. (Jeremia 2, 13).
Afaka ny nanana loharano mamy tsara ho azy, na afaka ny hametraka rano tsy mihetsika avy ao amin’ilay famorian-drano mitete. Israely dia te-hanao izay tiany atao.
Ny fametrahanao ny tenanao mialoha an’Andriamanitra dia mametraka anao ho amin’ny tsi-fahombiazana.
Fampitandremana 4 – ny tsi-firaharahiana ny fibebahana dia mitondra amin’ny fahamafisan-katoka.
Nandà ny hiaiky fa diso sy hibebaka amin’ny ratsy fanaony Israely. Ny vokany, dia lasa mafy fo sy mbola nanohy ny hiaina tao anatin’ny tsy fankatoavana Israely. Noho izany dia nanapa-kevitra ny hamafa azy tsy ho eo anatrehany Andriamanitra satria tsy nanaiky ny hanantona Azy izy.
“…Fa efa niamboho Ahy izy fa tsy nanatrika Ahy…” (Jeremia 2, 27b)
Inona ny vokatry ny ratsy nataony ? Ny toko Faha 37 miteny amintsika fa Andriamanitra dia namela ny mpanapaka avy amin’ny firenena hafa tahaka an’I Babylona ho tonga hanohitra an’I Jerosalema. Nohodidininy ny tanàna ka nobaboiny, nony afaka ela dia nopotehiny. Noho ny tsi-fankatoavan’ ny mpanjakan’ ny Joda dia lasa babo izy. Natao vavolombelona ny famonoana ny zanany izy. Ny masony dia nesorina ary napetraka tao antranomaizina izy nandritra ny andro niainany. Tao Jerosalema kosa, ny lapan’ny mpanjaka dia nodorana ka tsy nisy tavela, ny masomboly sy ny voly rehetra dia nosimbaina avokoa, sy ireo fianakaviana rehetra koa. Maro ireo olona no nentina ho babo tany Babylona ka natao andevo.
Famjpitandremana 5 – Ny ota dia misy vokany.
Mety tsy izao ankehitriny izao, na amin’ny herinandro manaraka, fa tandremo fa misy voka-dratsiny foana ny ota.
“…Koa fantaro sy hevero fa ratsy sady mangidy ny nahafoizanao an’I Jehovah Andriamanitrao…” (Jeremia 2, 19b).
Mety halaim-panahy hieritreritra isikafa hoe tsy misy tanteraka ary mizaka ny vokatry ny toe-panahy ratsy izay ataon’ny Baiboly hoe “ota” isika ary koa hoe Andriamanitra anie dia Fitiavana, ka tsy maninona raha toa ka manota isika e ! Tena tsy mijery ny ota farany izay kely ataontsika anie Andriamanitra e!. Indrisy, fa matotra noho izany no mitranga. Nefa Andriamanitra dia tena tia antsika, ny fahamasinany sy ny fahamarinany no mahatonga Azy tsy hanaiky velively ny ratsy. Tahaka ny nolazain’I Habakoka sy Isaia, “ Hianao Izay madio maso ka tsy te-hitsinjo ny ratsy” (Habakoka 1, 13), “fa ny helokareo ny efitra manpisaraka anareo amin’Andriamanitrareo.ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino Izy” Isaia 59, 2